Studio 7 Headlines, Tuesday, May 17, 2016
Almost 20 Chitungwiza residents and dismissed council workers, who were arrested last week after clashing with the police, are expected to appear in court today.
Twenty Zimbabweans, mostly children and teens, will have free corrective surgery for cleft lip and palate, courtesy of a United States-based not-for-profit organization, Operation of Hope, which has brought a team of specialist surgeons and nurses for the first time to Bulawayo.
Some Zimbabweans say they are travelling long distances to access health care in clinics and hospitals, 36 years after the country attained independence from colonial rule.
This evening we will be featuring Mandela Washington fellow, Nobukhosi Ndlovu, an advocate for people living with hearing impairments.
Zimbabwean academics shine in South Africa as they take over an almost derelict farm and turn it into a highly productive entity.
And Zimbabweans say the government has to make prudent policy shifts to rescue the ailing economy, which the International Monetary Fund, says is facing serious problems such as liquidity constraints and lack of foreign direct investment.
This evening on Livetalk hosts of the Connection will be talking with listeners and experts about 39 year-old pastor Evan Mawarire of His Generation Church, who is urging all Zimbabweans to carry their flags as a symbol of patriotism, under the hash tag This Flag.